Rindrambaiko - Ubunlog | Ubunlog (Pejy 6)
MATE Dock Applet dia mahazo bara fandrosoana toy ny Unity
Ny MATE Dock Applet dia mahatratra ny kinova 0.74 ary nahitana fiasa vaovao mahaliana, toy ny bara karazana Unity na balaonina ambonin'ireo sary masina.
Power Installer, ny installer tonga lafatra ho an'ny Elementary OS
Raha mpampiasa Elementary OS ianao dia liana amin'ny fahalalana Power Installer, mpiorina noforonina ho an'ny fizarana malaza miorina amin'ny Ubuntu.
Ahoana ny fametrahana bara fandrosoana Firefox ao amin'ny Unity
Addon kely Firefox dia mamela anao hahafantatra ny satan'ireo fisintoman'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fampandrenesana Unity.
Ny lohahevitra Arc GTK dia ho hita ao amin'ny Ubuntu 16.10 ihany koa
Tianao ve ny lohahevitra ho an'ny Ubuntu Arc GTK? Vaovao tsara: ny mpamorona azy dia efa nanambara fa ho hita ao amin'ny Ubuntu 16.10 i Yakkety Yak.
Ny Gnome Maps dia misy izao noho ny Mapbox
Farany dia mihetsika indray ny Gnome Maps, noho ny serivisy Mapbox, serivisy maimaim-poana izay hanolotra mitovy amin'ny Maps Quest ho an'ny fampiharana malaza ...
Gradio dia hamela anao hihaino radio amin'ny PC miaraka amin'ny Ubuntu
Mitady rindranasa mihaino radio any Ubuntu ve ianao? Aza mijerijery intsony, Gradio dia fampiharana maimaim-poana izay mamela anao hanao izany.
Battery Monitor, na ny fomba fandraisana fampandrenesana momba ny hetsika bateria ao amin'ny Ubuntu
Te hahazo fampandrenesana momba ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny batterin'ny Ubuntu PC anao ve ianao? Ny zavatra tadiavinao dia ny Monitor Monitor.
Pokémon GO Server Status, zahao ny satan'ireo mpizara Pokémon GO
Te hahafantatra ve ianao raha maty ny mpizara Pokémon GO na miasa tsy misy olana avy amin'ny Ubuntu? Hampahafantatra anao amin'ny fotoana rehetra ny Pokémon GO Status.
Min Browser dia mandray fiasa vaovao amin'ny fanavaozana farany farany
Nahazo fanavaozam-baovao vaovao ilay mpizaha hazavana sy tsiranoka Min izay nahatonga ny mpitety tranonkala ho hendry kokoa.
Ahoana ny fametrahana JDownloader amin'ny Ubuntu 16.04
Te-hametraka mpitantana fampidinana ao amin'ny Ubuntu 16.04 ve ianao ary tsy mahalala ny fomba hanombohana? Eto izahay dia manazava ny fomba fametrahana JDownloader.
Ubuntu koa dia hanana ny kinova Skype
Microsoft dia nanolotra ny kinova Skype vaovao ho an'ny Ubuntu sy Gnu / Linux rafitra, mpanjifa ofisialy izay hanome olana amin'ny rafitra fiasa hafa ...
Ahoana ny fametrahana Facebook Messenger amin'ny Ubuntu
Te hiresaka amin'ny Facebook Messenger avy amin'ny Ubuntu ve ianao ary tsy fantatrao ny fomba? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny azo atao roa.
Canonical hampiroborobo ny fonosana haingana any Alemana
Canonical sy Ubuntu dia nanambara hetsika iray any Alemana, ao amin'ny tanànan'i Heidelberg. Hetsika iray mikendry ny hanaparitaka ireo fonosana haingana sy ny fomba fanaovana azy
Servo, ny fomba fitsapana ny mpitety Mozilla manaraka izao
Te hanandrana ny mpitety tranonkala manaraka an'i Mozilla amin'ny Ubuntu PC anao ve ianao? Servo no iantsoana azy, nosoratana tamin'ny 0 izy ary eto dia asehonay anao ny fomba hitsapana azy.
Tsy tianao Gedit 3.18? Ampidino ilay kinova taloha amin'ny fanarahana ireo dingana ireo
Tsy vitsy ny mpampiasa no nahita ny kinova Gedit 3.10 nisy diso fanantenana. Raha iray amin'izy ireo ianao dia miverena amin'ny kinova 3.10 miaraka amin'ity fampianarana ity.
Ny beta farany nataon'i Franz dia misy ny fanohanana ny Gmail sy Tweetdeck, ankoatry ny hafa
Franz, ilay fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa indrindra, no nohavaozina tamin'ny kinova 3.1 beta ary misy ny fanohanana ny Gmail, Inbox, Tweetdeck, ary maro hafa.
Vaovao farany Kernel ho an'ny Ubuntu 12.04 LTS sy Ubuntu 14.04 LTS
Araka ny fantatsika tsara, ny kinova Ubuntu LTS dia ireo izay mahazo fanohanana maharitra. Ary io vao tsy ela akory izay, ...
Ahoana ny fomba hitsapana ny Flatpak amin'ny Ubuntu
Lahatsoratra kely momba ny fametrahana sy fitsapana ny rafitra fonosana vaovao antsoina hoe Flatpak, rafitra iray izay azo ampiasaina amin'ny Ubuntu sy ny derivatives ...
Ahoana ny fanangonana Ada ao Ubuntu miaraka amin'i Gnat
Amin'ny maha mpianatra injeniera momba ny solosaina ahy dia tsy maintsy nanao fandaharana tao amin'ny Ada aho tamin'ity taona ity. Ary ny nahagaga ahy dia, ambonin'izany rehetra izany satria ...
Ahoana ny fananana widgets ao amin'ny Ubuntu
Ireo widgets dia mety ho ao Ubuntu ihany koa. Lazainay aminao hoe inona ny safidy misy mba ahazoana ireo widgets tsy misy olana amin'ny birao Ubuntu.
Esory amin'ny Ubuntu ny loko miaraka amin'i Oomox
Oomox dia fitaovana iray ho an'ny Ubuntu izay ahafahanao manamboatra sy mampifanaraka ny interface amin'ny GTK + 2 sy GTK + 3, miaraka amin'ny sisiny boribory sy gradients loko.
Alamino ary zarao amin'i Gwenview ny sarinao ao amin'ny Kubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia te hiresaka fitaovana iray tena mahaliana izahay hitantanana ny sarinay sy hizarana izany amin'ny tambajotranay ...
Fampianarana kely momba ny fomba famongorana ireo kernel taloha izay tsy ampiasaina intsony amin'ny fomba tsotra sy mandeha ho azy izay hanafaka ny toerana ao amin'ny kapila mangarahara.
Te hanandrana ny kinova manaraka amin'ny mpilalao VideoLan ve ianao? Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fametrahana VLC 3.0.0 savaranonando amin'ny Ubuntu 16.04.
Fantaro izay solosainao anananao amin'ny Inxi amin'ny Ubuntu
Inxi dia baiko azo alaina ao amin'ny Ubuntu 16.04 izay manondro sy mampiseho amintsika ny fampahalalana rehetra momba ny solosainay manomboka amin'ny processeur mankany amin'ny kernel
Ubuntu After Install, fomba iray hametrahana fonosana mahaliana aorian'ny fametrahana Ubuntu
Efa nametraka Ubuntu ve ianao ary mieritreritra fa tsy manana rindrambaiko mahaliana? Ny script Ubuntu After Install dia mety ho tadiavinao. Andramo izany!
Tantano amin'ny alàlan'ny gPodder ao amin'ny Ubuntu 16.04 ny podcast-nao
Ny fifandraisana sy ny famoronana votoaty, na sosialy na koltoraly, dia miova noho ny Internet. Ary izany ve ny ...
Resabe vaovao ao amin'ny Ubuntu; sary famantarana ny tranonkala ankehitriny
Mpanamboatra sy mpampiasa maromaro no nitaraina momba ny sary famantarana ny tranonkala, sary famantarana izay miteraka resabe noho ny fitoviana amin'ny Safari saingy tsy ovaina ...
Fanavaozana ny Caliber vaovao mankany amin'ny kinova 2.58
Ny mpitantana ny e-book Caliber dia mahatratra ny kinova 2.58 ary ao anatin'izany ny fanatsarana ireo bibikely voalaza ao amin'ny kinova taloha sy ny fanohanana ny Qt 5.5.
k2pdfopt: manatsara ny fisie PDF raha ampiasaina amin'ny fitaovana finday
Manana olana amin'ny famakiana rakitra PDF amin'ny findainao ve ianao noho ny endrik'izy ireo? Androany no anoloranay anao k2pdfopt, ny valin'ny vavakao.
Mamorona Snaps Ubuntu 16.04 miaraka amin'ny Snapcraft 2.9
Snapcraft dia nohavaozina amin'ny kinova 2.9 ary mampiditra endri-javatra vaovao toy ny toetran'ny devmode YAML, epoch, ary ny asan'ny bash feno.
Ahoana ny fametrahana Caliber amin'ny Ubuntu 16.04
Caliber dia mpitantana ebook Software maimaim-poana, mpitantana ebook izay havaozina matetika. Eto izahay dia manazava ny fomba fametrahana ny kinova farany ...
Ahoana ny fametrahana Min, ny navigateur mahay ao Ubuntu
Ny habetsaky ny fampahalalana ananantsika ankehitriny amin'ny Internet dia midadasika. Mety ho toa tsy misy dikany izany, zavatra ...
Ampivoary ny Shotwell Photo Manager ao amin'ny Ubuntu 16.04
Na eo aza ny rahona fisalasalana izay napetraka tao Yorba momba ny fampiharana sasany, toa ...
Afaka miditra amin'ireo tranonkala voasivana ao amin'ny firenenao ianao miaraka amin'ny Lantern
Efa naniry hitsidika tranokala ve ianao satria voafetra izany ao amin'ny firenenao? Ny vahaolana tadiavinao dia ny lentera.
Elementary Tweak dia fitaovana lehibe ho an'ireo izay tsy te-handrindra ny Pantheon azy ireo amin'ny tanana, na izany aza dia misy ny risika sy ny tombony azo ...
Toolbar Alternative for Rhythmbox dia mampiseho ny lafiny maiziny
Toolbar Alternative dia mivoatra amin'ny kinova 0.17 ary mampiditra endrika vaovao ho an'ny Rhythmbox toy ny lohahevitra maizina sy sokajy mitsangana.
Manao veloma ireo fampandrenesana manelingelina amin'ny NoNotifications
Amin'ny NoNotifications dia azonao atao ny manakana ireo fampandrenesana amin'ny birao mahasosotra tsy hiseho eo amin'ny rafitrao sy manelingelina ny asanao.
Ny Portable Apps ho an'ny Ubuntu 16.04 LTS suite dia efa misy izao
Ny dobo fisoratana anarana Portable Apps ho an'ny Ubuntu 16.04 LTS dia misy ankehitriny, ao anatin'izany ny rindranasa maro azo alefa ho an'ny Linux.
WebTorrent Desktop dia havaozina ary efa manohana dikanteny
Ny mpilalao torrent streaming, WebTorrent Desktop dia nohavaozina amin'ny kinova 0.4.0 ao anatin'izany ny fanohanana ny dikanteny.
Ahoana ny fampiasana Color Emojis amin'ny Ubuntu
Toa mahazo hery eo amin'ny tontolon'ny serasera amin'ny Internet i Emojis. Fantatsika rehetra ...
Ahoana ny fahitana ny toetr'andro ao amin'ny Terminal miaraka amin'ny Open Weather
Amin'ity lahatsoratra ity dia tianay haseho anao ny fomba hahitanay ny toetr'andro ankehitriny ao amin'ny Terminal amin'ny fomba tena mahafinaritra….
OpenExpo 2016, hetsika hankafizana Rindrambaiko Maimaimpoana
Amin'ny 2 Jona, OpenExpo 2016 no hatao, hetsika izay hihaonan'ny tontolon'ny asa sy ny tontolon'ny Free Software hanome ny tsara indrindra ...
Ovao ho an'ny FileBot ny anaranao multimedia
FileBot dia programa mamela ny fanovana anarana vaovao ho an'ny rakitra mozika sy horonan-tsary ho an'ny katalaoginy marina.
Ahoana ny fametrahana Slack amin'ny Ubuntu
Raha tsy misy fampiharana fandefasan-kafatra ho an'ny solosaina ho mpanapaka mazava, safidy tsara dia Slack. Atorinay anao ny fomba fametrahana azy amin'ny Ubuntu.
ReText, mpamoaka lahatsoratra, mahatratra ny endrika 6.0
Ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra an'ny Markdown sy reStructredText, ReText dia nohavaozina tamin'ny kinova 6.0 ary nahitana fiasa vaovao tena ilaina.
overGdrive, mpanjifa Google Drive iray hafa ho an'ny Linux
Raha tsy misy ny mpanjifa ofisialin'ny Google Drive, ny oneGdrive dia aroso ho fomba azo antoka sy matanjaka ho an'ny fampifanarahana rakitra.
Ampidiro WordPress amin'ny Ubuntu amin'ny dingana tsotra telo miaraka amin'i Docker
Ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy ataontsika aorian'ny fametrahana ny Ubuntu 16.04, ary maro hafa raha toa ka avy amina fametrahana ...
uNav dia nohavaozina amin'ny kinova 0.59 miaraka amin'ny fanatsarana kely azo ampiasaina toa ny zoom kely, ny fanamafisana ny lokony sy ny loko ary ny fampahalalana POI.
Nambaran'i Mozilla fa ho tonga toy ny fonosana haingana ho an'ny Ubuntu 16.04 i Firefox
Mozilla dia efa nanambara fa ho hita ho toy ny fonosana haingana ny browser Firefox ao aminy manomboka amin'ny Ubuntu 16.04 LTS. Toa tsara izany.
Clementine dia havaozina amin'ny kinova 1.3.0 miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Iray amin'ireo mpilalao tsara indrindra ho an'ny Linux, Clementine dia novaina ho amin'ny kinova 1.3.0 ary misy fiasa vaovao mahaliana sasany.
Ireo no fampiharana mandresy amin'ny Ubuntu Scopes Showdown 2016
Ny ekipan'ny Ubuntu dia namoaka ny lisitr'ireo sehatra mandresy amin'ny Ubuntu Scopes Showdown 2016, fifaninanana izay mikendry ny hampiroborobo ny fampandrosoana ny Ubuntu Phone
Whatsie, mpanjifa WhatsApp ho an'ny Linux mendrika horaisina
Te hampiasa tranonkala WhatsApp ve ianao nefa tsy te hiankina amin'ny browser? Safidy tsara dia ny Whatsie, mpanjifa WhatsApp ho an'ny Linux.
GNOME Twitch 0.2.0 manampy endri-javatra Chat vaovao
Vao tsy ela akory izay, ny GNOME Twitch dia nohavaozina amin'ny kinova 0.2.0, ary farany, amin'ity kinova ity dia efa ananantsika ny ...
LibreOffice 5.1.2 dia misy ao amin'ny repositories default an'ny Ubuntu
Rehefa afaka kelikely hita ao amin'ny fitoeram-bokiny manokana, dia misy ao amin'ny repositories ofisialy Ubuntu LibreOffice 5.1.2.2.
Ny mpanjifa ofisialin'i Simplenote dia tonga ao Ubuntu
Simplenote, ny fampiharana Automattic dia efa manana mpanjifa ho an'ny Ubuntu sy ho an'ny Gnu / Linux, mpanjifa ofisialy izay hampifanarahina amin'ny sisa amin'ireo fampiharana ofisialy ...
Soundnode, mpanjifa manify an'ny SoundCloud
SoundNode dia mpanjifa SoundCloud tsy ofisialy izay miasa ho fampiharana hampiasaina ao amin'ny Ubuntu, zavatra mora sy tsotra atao ...
Ahoana ny fomba ahazoana ny kinova Kdenlive farany amin'ny Ubuntu
Torolàlana kely momba ny fomba fametrahana trano fitahirizana mpanampy hahazoana ny kinova farany an'ny Kdenlive, tonian-dahatsoratry ny horonan-tsary ankafizin'ny Tetikasa KDE ...
Ampidiro ny kinova farany amin'ny plank dock amin'ny Ubuntu
Ho an'ireo izay tsy mahalala, Plank dia iray amin'ireo dock malaza sy maivana indrindra azo jerena ankehitriny ...
Mampiasa ny Google Play Music ve ianao? Afaka mihaino ny mozika anao amin'ny Ubuntu ianao izao
Mampiasa Google Play Music amin'ny Android-nao ve ianao? Raha eny, dia misy vaovao tsara ho anao. Mpanamboatra iray antsoina hoe Samuel…
Milamina ny mpanjifa 1.x Spotify ankehitriny, holazainay aminao ny fomba fametrahana azy amin'ny Ubuntu
Ny mpanjifa Spotify version 1.x dia milamina ihany amin'ny farany. Ny repository Linux miorina dia nampiana ...
Avereno amin'ny alalàn'ny Linux 32-bit anao ny fanampiana Google Chrome
Google dia namarana ny fanohanany ny fampiharana Chrome 32 bit amin'ny Linux. Asehonay anao ny fanavaozana ny parcel raha mampiasa kinova 64-kely ianao.
Ahoana ny fomba hifehezana ny mozika Spotify amin'ny launcher ao Ubuntu
Ny kinova Spotify farany ho an'ny Linux dia nahitana vaovao mahaliana fa, toy ny mahazatra kokoa noho isika ...
Mamaky tantara an-tsary ao amin'ny Ubuntu miaraka amin'i MComix
Ao Ubunlog izahay dia te-hanokana fidirana amin'ilay tantara an-tsary. Mahagaga, mainka fa ny indostrian'ny tantara an-tsary ...
Ahoana ny fametrahana Kodi amin'ny Ubuntu, ho an'ny mpilalao haino aman-jery tsara indrindra
Raha mitady mpilalao amin'ny faritra rehetra ao amin'ny solo-sainao Ubuntu ianao, dia mamporisika an'i Kodi izahay. Atorinay anao ny fomba fametrahana azy sy zavatra hafa.
Ampidiro ny Rhythmbox 3.3 sy ny plugins rehetra ao aminy
Ao Ubunlog dia mazàna mandinika tsara ny fiainana andavanandron'ireo mpilalao audio isika. Noho izany, mitondra anao hatrany izahay ...
Ahoana ny fametrahana Visual Studio Code amin'ny Ubuntu
Fampianarana kely momba ny fametrahana ny Visual Studio Code ao amin'ny Ubuntu amin'ny fomba tsotra sy mora, amin'ny fampiasana ireo loharano niavian'ny programa.
BleachBit, esory ireo rakitra tsy ilaina ao amin'ny rafitra fiasa Linux anao
Te hamafa angon-drakitra tsy ilaina toy ny cache sy fisie vonjimaika ve ianao ary tsy fantatrao ny fomba? Raha eny ny valiny dia tokony hanandrana ny BleachBit ianao.
Fanamarihana haingana ao amin'ny Ubuntu miaraka amin'ny FromScratch
Atolotray ny programa FromScratch, fampiharana minimalista ho an'ny Ubuntu izay ahafahanao maka naoty kely haingana.
OpenShot 2.0 beta azo ampahibemaso izao. Atorinay anao ny fomba fametrahana azy
OpenShot 2.0 dia efa ela no nisy tamin'ny beta, fa ny kinova fahatelo kosa dia navoaka ary azo ampahibemaso. Andramo izany!
Safidy 4 maimaim-poana amin'ny Photoshop ao Ubuntu
Fanangonana kely amin'ireo safidy efatra maimaim-poana amin'ny Photoshop izay azo zahana sy apetraka mora foana ao amin'ny Ubuntu.
SMPlayer, mpilalao maivana ho an'ny Ubuntu 15.10
SMPlayer dia mpilalao maivana ary, ankoatry ny fanolorana fampifanarahana haino aman-jery multimedia, dia afaka milalao horonantsary YouTube.
Gis Weather, widgetn'ny toetr'andro amin'ny biraonao Linux
Tianao ve ny widget? Tokony hiaiky aho fa tsy mpampiasa tiako manana na inona na inona ao ...
Fomba dimy hampiasana Telegram amin'ny PC PC anao
Mahazo laza i Telegram rehefa mandeha ny volana ary mendrika izany. Atoro anao anao ny fomba 5 hampiasana azy amin'ny Ubuntu.
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu anao ny Quod Libet: tranomboky mozika, mpamoaka lahatsoratra ary mpilalao rehetra
Quod Libet dia mpilalao mozika miorina amin'ny Python izay mampiasa tranomboky sary miorina amin'ny GTK + ary izay…
Ahoana ny fomba famakiana boky amin'ny Ubuntu
Raha tonga ny takelaka Ubuntu dia misy takelaka Ubuntu maro izay ampiasaina amin'ny famakiana. Eto izahay dia milaza aminao izay fampiharana hampiasana hamaky ebook.
Mitady mpanjifa Twitter tsara ho an'ny Ubuntu? Andramo Corebird, mora apetraka izao
Ireo mpampiasa Ubuntu dia tsy manana mpanjifa Twitter manana kalitao mora apetraka, na izay taloha. Afaka mametraka Corebird miaraka amina fonosana .deb isika izao
uGet, mpitantana fampidinana an'ny Ubuntu izay tsy azonao hadino
Uget dia mpitantana fampidinana an-tsehatra amin'ny fomban'ny jDownloader izay hanampy antsika hifehezana ireo rohy fampidinana ireo mpizara cyber sy tranonkala mitovy aminy
uNav dia havaozina ho an'ny Ubuntu Touch
uNav dia mahazo fanavaozana vaovao ho an'ny Ubuntu Touch izay misy ny sasany amin'ireo lahasa misy amin'ilay programa voalaza fa hanatsara ny asany.
Notepadqq, mpamoaka kaody feno indrindra
Manolotra ny notepadqq izahay, clone of notepad ++ ho an'ny Linux fenoina fiasa sy fiasa hanamorana ny asan'ny programmer.
Ny rafitra ZFS dia hifanaraka amin'ny Ubuntu 16.04
Ny Ubuntu dia saika nanakambana ny filesystem ZFS amin'ny famoahana manaraka na dia tsy ho safidy mahazatra aza izy io noho ny olana vitsivitsy mbola misy.
Apt-Fast, baiko manan-danja ho an'ny mpampiasa Ubuntu
Apt-fast dia baiko iray amin'ny terminal izay ahafahantsika manafaingana ny fisintomana sy ny fametrahana ny rafitra amin'ny fomba lehibe sy mahagaga
Mametraka Android Studio amin'ny alàlan'ny Ubuntu Make
Mampianatra ny fomba fametrahana sy fikirakirana Android Studio ao amin'ny Ubuntu izahay, amin'ny fampiasana ny fitaovana Ubuntu Make hametrahana programa fampandrosoana.
Fandaharana 3 hanaovana ny kaontintsika ao amin'ny Ubuntu
Lahatsoratra kely momba programa telo maimaim-poana sy maimaim-poana hitazonana ny kaontinay any Ubuntu. Zavatra izay ho mora kokoa amin'ny taona manaraka izay hanomboka.
Ampidiro ao amin'ny Elementary OS miaraka amin'i DSE ny rindranasao
Manolotra DSE izahay, mpitantana fampiharana minimalista ho an'ny Elementary OS izay mamela anao hitantana programa, lohahevitra ary codec amin'ny alàlan'ny tsindry totozy vitsivitsy fotsiny.
Jereo ny Deepin Music Player, mpilalao mahay ao amin'ny Ubuntu
Deepin Music Player dia mpilalao mozika ho an'ny Ubuntu novolavolain'ny ekipa LInux Deepin. Izy io dia manana interface tsara sy fahaiza-manao lehibe
Lahatsoratra kely momba ny safidy hafa misy ao Ubuntu hialana amin'ny fampiasana Autocad, fa aleo hampiasa ny fisie raha tsy misy programa voaloa.
Te hahazo fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny PC anao ve ianao ary tsy mahalala ny fomba? HardInfo dia rindrambaiko kely izay hilaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao.
Deepin Terminal Emulator no emulator terminal an'ny Deepin, distro sinoa miaraka amin'ny mpanaraka maro azy. Azonao atao izao ny mizaha toetra azy amin'ny fametrahana Ubuntu anao
Manomboka mandray fampiharana Android ny Plasma Mobile
Plasma Mobile dia efa manana rindrambaiko, indrindra ny Subsurface, fampiharana Android izay natokana tao anatin'ny telo andro.
Fampitana vs. Qtorrent, iza no tsara kokoa misintona rakitra .torrent?
Betsaka ny mpanjifa amin'ny fisie torrent, fa iza amin'ireo no safidintsika? Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny Transmission sy Qtorrent isika.
HPLIP dia efa manana fanohanana ho an'ny Ubuntu 15.10
HP dia nanavao ny mpamily HPLIP ary mifanaraka amin'ny rafitra fiasa isan-karazany, ao anatin'izany ny Ubuntu 15.10. HPLIP koa dia mampiditra fitaovana vaovao.
Ny efijery fidirana dia somary tsotra fa indraindray ny mpampiasa vao tsy mahalala tsara hoe inona izany. Eto izahay dia milaza aminao ny faritra misy azy ary inona izany.
USB Creator dia hiova ao amin'ny Ubuntu 16.04
Ny USB Creator, fitaovana handoroana sary disk amin'ny USB, dia havaozina sy ovaina ho an'ny Ubuntu 16.04, mba hahatonga azy ho multiplatform sy malefaka
Ny kinova farany an'ny Kodi, 15.2, dia azo sintonina sy apetraka amin'ny Ubuntu 15.10. Manome anao ny dingana ilaina izahay mba hahavitana azy.
Cool Retro Term dia emulator terminal natao ho an'ireo mpampiasa nostalgic indrindra, ireo izay tsy mahita solosaina tamin'ny taona 80 tany ho any
Xtreme Download Manager, mpitantana fampidinana tsara ho an'ny Ubuntu
Xtreme Download Manager dia mpitantana misintona manokana ho an'ny Ubuntu, izay mandraka ankehitriny dia nanana vahaolana multiplatform. Andramo izany!
Efa misy ny kinova vaovao an'ny mpilalao Yarock, ampidino amin'ny alàlan'ny PPA
Yarock dia mpilalao audio voasoratra ao amin'ny Qt manokana ho an'ny Linux, ary amin'ity lahatsoratra ity dia hanome anao ny fomba hametrahana azy izahay ary hanana azy mora foana amin'ny Ubuntu.
Ahoana ny fampiasana Facebook Messenger amin'ny Pidgin
Facebook Messenger dia safidy malaza indrindra amin'ny fifandraisana amin'ireo namantsika. Afaka mampiasa azy io amin'ny alàlan'ny Pidgin ianao noho ny Facebook Purple.
Amboary matihanina amin'ny saryxx ny sarinao
Fotoxx dia programa famerenana sary maivana sy maivana ary hanampy anao hanome ny sarinao ny fikasan'izy ireo mba hahasarika kokoa.
Fotoana hanavaozana na hampiatoana ny ivon-toerana Ubuntu Software?
Ny Ubuntu Software Center dia mety ho tantara amin'ny taona ho avy, na ny vaovao farany. Ampidiro ny lahatsoratra raha te hahalala bebe kokoa.
Ampidiro ny kinova farany an'ny mpilalao ExMPlayer
Exmplayer dia kinova maharitra an'ny mpilalao MPlayer matanjaka izay hasehonay anao ny fomba fametrahana ao amin'ny Ubuntu na Linux Mint ato amin'ity lahatsoratra ity.
Izahay dia manao famerenana kely momba ny fanatsarana ny kinova beta 0.3.8 an'ny Popcorn Time ary manazava ny fomba fanavaozana an'io kinova io izahay.
Ny programa maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny mpitendry mozika
Azavainay ny fomba fampifandraisana ny gutiarra na ny basinao amin'ny solosainao amin'ny GNU / Linux ary miresaka momba ny programa tsara indrindra ho an'ny mpitendry mozika izay hitanao ao amin'io rafitra io izahay.
Famerenana Atom 1.0: mpamoaka lahatsoratra vaovao maimaim-poana an'i GitHub
Famerenana ny tonian-dahatsoratra Atom vaovao avy amin'ny GitHub. Miresaka ny tombony ananany sy ny fomba fametrahana azy amin'ny Ubuntu izahay.
LiVES dia fitaovana fanovana horonantsary natao ho an'ireo mpampiasa tsy miankina sy matihanina. Mampianatra anao ny fametrahana azy amin'ny Ubuntu izahay.
Apetraho amin'ny Ubuntu ny kinova vaovao an'ny Steam
Steam no fivarotana lalao video an-tserasera malaza novolavolain'i Valve. Navoaka ny kinova vaovao an'ny mpanjifanao Linux, ianaro ny fomba fametrahana azy.
Eto ny VirtualBox 4.3.28, ary amin'ny maha-tsimbadika vaovao iray amin'ireo vahaolana virtualization malaza indrindra dia hasehonay anao ny fomba fametrahana azy amin'ny Ubuntu.
Guake, ny terminal drop-down izay tokony ho fantatrao
Guake dia emulator terminal drop-down mahaliana ho an'ny tontolo GTK izay tena ilaina amin'ny mpampiasa mandroso. Midira hahalala bebe kokoa.
Gis-Weather Widget nohavaozina hanohanana ny Ubuntu 15.04
Gis Weather Widget dia navaozina hanohanana ny Ubuntu 15.04. Lazainay aminao ny fomba ahazoana ny kinova vaovao amin'ity widget-n'ny toetr'andro mahasoa ity.
Indraindray SysMonitor dia hita ao amin'ny Ubuntu 15.04
Ny kinova vaovao an'ny SysMonitor ankehitriny dia vonona hampiasa amin'ny Ubuntu 15.04. Lazainay aminao ny vaovaony sy ny fomba fametrahana azy mora foana sy haingana.
Ampidiro amin'ny Ubuntu ny kinova vaovao an'ny Geary
Geary no fampiharana mailaka default ho an'ny Elementary OS, ary fivoaran'i Yorba, fantatra koa amin'ny hoe Shotwell. Ampidiro ny kinova farany.
Navoaka ny Audacious 3.6, apetaho amin'ny Ubuntu
Iray amin'ireo mpilalao tsara indrindra ho an'ny Linux, Audacious, dia namoaka kinova vaovao. Lazainay aminao izay tokony hatao mba hanananao azy amin'ny fametrahana Ubuntu anao.
Ahoana ny fametrahana Java 9 amin'ny Ubuntu
Azavainay amin'ny fomba haingana sy mora ny fametrahana ny kinova fidirana voalohany an'ny Java 9 ao amin'ny Ubuntu. Ny fomba sy fiheverana vitsivitsy amin'ity lahatsoratra ity.
Fomba vaovao handaminana ny fampisehoana sy ny fanaraha-maso ao amin'ny KDE
Dan Vrátil sy Alex Fiestas dia nanatsara ny fampirantiana sy fanaraha-maso ny fitantanana ao amin'ny KDE, ka nahatonga azy io ho asa tsotra sy ho an'ny mpampiasa.